काठमाडौँ । बलिउड र साउथ सिनेमाको विवाद चलचित्र उद्योगमा बढ्दै गएको छ । एकातिर विजय देवरकोंडा, रश्मिका मन्डन्ना, विजय सेतुपति जस्ता साउथ सुपरस्टारहरु बलिउडमा डेब्यु गर्न लागेका छन् । उता, साउथ फिल्म इन्डस्ट्रीका केही कलाकारहरू हिन्दी सिनेमामा पाइला चाल्ने प्रश्नमा आक्रोशित भएका छन् ।
भर्खरै महेश बाबुले आफ्नो फिल्म मेजरको ट्रेलर लॉन्चको क्रममा भनेका थिए, 'उनीलाई बलिउडबाट धेरै अफर आइरहेको छ, तर बलिउडले उसलाई वहन गर्न सक्दैन ।' महेश बाबुको यो भनाइले बलिउड र साउथको विवादमा घ्यूको काम गरेको छ ।
तर अब प्रश्न उठ्छ कि बलिउडले उनलाई धान्न सक्दैन, यसबाट महेश बाबुको के मतलब थियो ? यसको पछाडि कारण हो वा उनलाई फिल्मको लागि प्रस्ताव गरिएको पारिश्रमिक ? तथ्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने साउथ सिनेमा सुपरस्टारको पारिश्रमिकमा पनि बलिउडभन्दा निकै अगाडि छ । जानौं केहि प्रमुख सुपरस्टारले कति पारिश्रमिक लिन्छन् :
फिल्म ‘बाहुबली’का मुख्य अभिनेता प्रभासलाई परिचयको आवश्यकता छैन । ‘बाहुबली २’ बक्स अफिसमा सफल भएदेखि नै प्रभासलाई बलिउड र साउथ फिल्मबाट अफर आइरहेको छ । रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने, अभिनेताले फिल्म ‘आदिपुरुष’का लागि करिब १५० करोड र फिल्म ‘स्पिरिट’का लागि १२५ करोडभन्दा बढी पारिश्रमिक लिएका छन् ।
बलिउडका खिलाडी कुमारपछिल्ला बर्षहरुमा निकै सफल अभिनेता मानिन्छन् । उनका फिल्म ब्लकबष्टर नभए पनि निर्मातालाई राम्रो कमाई दिने गर्दछन् । अक्षयकुमारले फिल्ममा नाफाको हिस्सा लिने गर्दछन । बर्षमा ३-४ फिल्म रिलिज गर्ने अक्षयकुमारले हरेक फिल्मबाट कम्तिमा सय करोड कमाई गर्ने गर्दछन् ।
फिल्म उद्योगका सबैभन्दा ठूला नाम मध्येका एक थालापथी विजयले आफ्नो अन्तिम फिल्मका लागि ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाएका थिए भने पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार हालै रिलिज भएको ‘बिस्ट’का लागि उनले करिब १२० करोड पारिश्रमिक लिएका छन् ।
प्रति फिल्म २० देखि २२ करोडसम्म पारिश्रमिक लिने चर्चित ‘पुष्पा’ सुपरस्टारले पुष्पाको दुई पार्टका लागि करिब ६० करोड भारु लिएका थिए । पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार उनले आफ्नो अर्को फिल्म ‘एटली’ बाट १०० करोडभन्दा बढी कमाउने बताइएको छ ।
टलिउडका मेगास्टारले प्रति फिल्म करिब ३५ करोड भारु लिन्छन् । आरआरआरको साथ, उनले आफ्नो शुल्क बढाए र लगभग 43 करोड रुपैयाँ पाएका थिए । तर, उनी अब १०० करोड क्लबमा सामेल भइसकेका छन् र गौतम तिन्ननुरीसँगको अर्को ठूलो प्रोजेक्टका लागि उनलाई १०० करोडभन्दा बढी पारिश्रमिक दिइनेछ ।
धेरै फ्यान फलोइङ भएका टलिउडका राजकुमारले एउटा फिल्मको करिब ५५ करोड पारिश्रमिक लिन्छन् । तर, पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार उनले आफ्नो नयाँ फिल्मका लागि ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिएका छन् ।
बलिउडका आफ्नै मिस्टर परफेक्शनिस्टहरू आफ्नो कामप्रतिको समर्पणका लागि परिचित छन् । आमिर खानले फिल्मको नाफामा प्रतिशत लिने हुनाले उनले एक फिल्मबाट कति कमाई गर्दछन् भन्ने अनुमान गर्न मुश्किल रहेको छ । उनले २-३ सालमा एक फिल्ममा काम गर्ने र उनको फिल्म सुपरहिट हुने गर्दछ । औसतमा उनले प्रति फिल्म सयदेखि १५० करोड भारु पारिश्रमिक पाउने गर्दछन् ।
सलमान खान एक सिरियल पैसा बनाउने अभिनेता हुन् । सलमानले फिल्मको कमाईबाट आफ्नो पारिश्रमिक लिने गर्दछन् । यसरी फिल्मले राम्रो नाफा कमाउदा उनको कमाई धेरै हुन्छ भने फिल्मले नाफा नकमाएमा उनको कमाई कम हुने गर्दछ । यसरी औसतमा सलमान खानले एक फिल्मबाट कम्तिमा सय करोडको कमाई गर्दछन् ।
कुनै समय यस्तो थियो कि किंग खानको कमर्सियल होल्डलाई उछिनेको कल्पना पनि गर्न नसकिने थियो तर पछिल्ला वर्षहरूमा शाहरुख खानले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन् र अहिले फिल्मबाट भएको नाफाको ४५ प्रतिशत लिने गर्दछन् । पछिल्ला बर्षहरुमा उनका फिल्म रिलिज भएका छैनन् तर पनि शाहरुख बलिवुडमा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेता अहिले पनि हुन् ।
बलिउडका एक्सन हिरोले प्रत्येक प्रोजेक्टका लागि ३० देखि ५० करोड मात्रै लिने गर्छन् । अजय देवगनको निर्देशन र अभिनयमा हालै रन २४ रिलिज भएको थियो । जुन बक्स अफिसमा असफल भएको छ ।
बक्स अफिसमा कार्तिक-कियाराको भूलभुलैया-२ को जादू
काठमाडौँ । बलिवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन र कियारा आडवाणी अभिनिती फिल्म भूलभुलैया-२ ले बक्स अफिसमा शानदार कमाई गरिरहेको छ । गत शुक्रबार रिलिज भएको भूलभुलैया-२ ले अहिलेसम्म भारतीय बक्स अफिसमा ७६
'बच्चन पाण्डे' को असफलतापछि अक्षयले घटाए पारिश्रमिक
काठमाडौँ । अभिनेता अक्षय कुमार बलिउडमा सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने अभिनेताको सूचीमा पर्छन् । उनी एक फिल्मबाट झण्डै सयदेखि ११० करोड रुपैंयाँसम्म पारिश्रमिक बुझ्छन् । तर, अहिले भने उनले आफ्नो
कार्तिक-कियाराको भूलभुलैया-२ को बक्स अफिसमा शानदार कमाई
काठमाडौँ । बलिवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन र कियारा आडवाणी अभिनिती फिल्म भूलभुलैया-२ ले बक्स अफिसमा शानदार कमाई गरेको छ । फिल्मले रिलिजको दोस्रो दिन १८ करोड ३४ लाख कमाई गरेको बलिवुड
दाङका दुई वडामा स्वतन्त्रबाट अध्यक्ष